Habka Horumarinta - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Tan iyo 1990 YALIS Naqshadeynta waxay soo saareysay gacan-ku-haynta albaabbada warshadaheeda Shiinaha halkaas oo dhammaan habka wax soo saarka uu ka dhaco.YALIS Design waxa ay waddamo kala duwan gaadhsiinaysay gacan-qabsiga albaabada ugu sarreeya.Waxa ay faafinaysay fikradda calaamadda YALIS oo ay horumarinaysay wax soo saarkeeda, iyada oo xawliga suuqa ku ilaalinaysa baahida macaamiisha.Qalabka albaabka casriga ah ee loogu talagalay Shiinaha oo laga dhigay heerka ugu sarreeya ee Shiinaha si loogu iibiyo adduunka oo dhan.
Laga soo bilaabo 1990kii, YALIS Design waxa ay ku beeray kanaalada qaybinta qalabka albaabka gudaha Shangdong iyo gobolada ku xeeran ee Shiinaha.
Sannadkii 2008, calaamad YALIS ayaa la sameeyay.Waxaan meel dhignay alaabada dhamaadka-sare iyadoo ujeedadu tahay xalka qalabka albaabka.
Tan iyo 2009, YALIS helay ISO9001 tayada nidaamka maamulka tayada, shahaado SGS, shahaado TUV iyo shahaado EN.
2014, iyadoo ku saleysan Talyaaniga caanka ah, YALIS wuxuu bilaabay inuu naqshadeeyo albaabka albaabka zinc ee qaabka casriga ah.
2015, YALIS waxay bilawday inay abuurto oo ay kobciso kooxda R&D.YALIS waxay si rasmi ah ugu dartay gacan-ku-hayeyaasha zinc alloy-ga oo ah khadka badeecada cusub.
Sannadkii 2016, YALIS 10 gacan-qabsi oo nashqado oo asal ah ayaa suuqa la geliyay oo waxay heleen rukhsad.YALIS-na waxa ay tixgelisay in ay horumariso qaab-dhismeed hal-abuur leh oo si fudud la isugu keeno iyo kala dirid.
2017, sababtoo ah qaybta ugu horeysa ee albaabbada naqshadaynta asalka ah ayaa lagu qiimeeyay suuqa, sidaas darteed YALIS waxay bilawday qaybta labaad ee albaabbada naqshadeynta cusub ee suuqa.Dhanka kale, YALIS waxa uu sameeyay isku day cusub oo ku saabsan nashqada gacanta albaabka: YALIS waxa uu isku dayay in uu isku daro galinta iyo dhammaysyada kala duwan ee gacanta albaabka.
Sannadka 2018, albaabbada albaabbada oo dhammayn madow dhalaalaya, gacan-qabsiga albaabka maqaarka, rosette fidsan oo dhumucdiisuna tahay 5mm iyo gacanta albaabka oo aan lahayn rosette, farshaxannadan 4 ayaa u soo baxay suuqa.Isla markaa, YALIS waxay bilowday inay ku faafiso summadeeda Yurub.
Sannadka 2019, YALIS waxay ka warqabtaa isbeddelka suuqa, sidaas darteed waxay soo saartay xalalka qalabka albaabka ee wax soo saarka albaabka, oo ay ku jiraan xalka albaabka muraayadda caatada ah, xalka albaabka alwaax, xalalka albaabka alwaax ee aluminium iyo xalka albaabka qolka ilmaha.
Sannadka 2020, si kor loogu qaado awoodda wax-soo-saarka iyo tayada wax-soo-saarka, aqoon-is-weydaarsiga wax-soo-saarka ee YALIS wuxuu soo bandhigay nidaamka maamulka ISO iyo qalabka wax-soo-saarka ee kala duwan, sida mashiinnada polishing ee tooska ah,Mashiinka Xakamaynta Tirooyinka Kumbuyuutarka (CNC), mashiinnada wax shubista ee tooska ah, mashiinnada baakadaha tooska ah iyo wixii la mid ah.
In la sii wado.